विवाह भएको चार दिन पछि वेहुलीले भनिन्, ‘तपाईलाई धो’का भयो, विवाह भोजमा रोटी प’काउन गएकी मलाई ज’बरजस्ती तपाइसंग विवाह गराइयो’….. – SUDUR MEDIA
विवाह भएको चार दिन पछि वेहुलीले भनिन्, ‘तपाईलाई धो’का भयो, विवाह भोजमा रोटी प’काउन गएकी मलाई ज’बरजस्ती तपाइसंग विवाह गराइयो’…..
December 26, 2020 AdminLeaveaComment on विवाह भएको चार दिन पछि वेहुलीले भनिन्, ‘तपाईलाई धो’का भयो, विवाह भोजमा रोटी प’काउन गएकी मलाई ज’बरजस्ती तपाइसंग विवाह गराइयो’…..
एजेन्सी । करिब १० लाख रुपैया खर्च गरेर विवाह गरेपछि बेहुलीले फोन गरेर म त तपाईको श्रीमती होइन ज’बरजस्ती विवाह गराइएको हो भन्दा वेहुलालाई कस्तो भयो होला ? विवाह गराउने दलालले एउटा केटी देखाएर अर्कै केटीसंग विवाह गराइदिएको रहस्य खुलेको छ । यो घ’टना भारत राजस्थानमा भएको हो ।
विवाह भएको चार दिन पछि माइत गएकी बेहुलीले फोन गरेर श्रीमानलाई तपाई माथि ठूलो धो’का भयो भन्दै सुनाइन् । भोजमा रोटी पकाउन भनेर मलाई बोलाइएको थियो तपाईसंग ज’बरजस्ती विवाह गराइयो । राजस्थानका उम्मेद सिंह माथि यस्तो घ’टना भएको हो । विवाहका लागि उनले १० लाख रुपैया खर्च गरेका थिए । उनलाई बिचौलिया गंगा सिंहले विवाहको ब्यवस्था मिलाएका थिए ।
केटीको माइती पक्ष आर्थिक रुपले क’मजोर छन् उता तिरको विवाहको खर्च पनि तिमीले नै गर्नुपर्छ भनेर उनले उम्मेदसंग उल्दै साडे ३ लाख रुपैया पनि लिएका थिए । अहिले उनी न्यायका लागि प्रहरी कार्यालय गरेका छन् । प्रहरीलाई बताए अनुसार करिब २० दिन अघि गंगा सिंह विवाहको लागि भन्दै उनको घरमा आएका थिए । गंगा सिंहले भने कि मेरो सम्बन्धमा केटी छ, म तिमीलाई विवाह गराइदिन्छु । उनलाई हुनेवाला बेहुली भन्दै पिन्कू कभरलाई देखाइयो । पिन्कुसंग उनको एंगेजमेन्ट भयो ।
पछि उम्मेद सिंहसंग गंगाले भने केटीको बुबाको आर्थिक अवस्था ठीक छैन, तपाईले विवाहको लागि खर्च गर्नुपर्नेछ र केटीको बुबालाई साढे ३ लाख दिनुपर्छ । विवाहको खुसीमा रमाएका उनले त्यो पैसा पनि दिए । डिसेम्बर ११ मा, उनलाई जन्ती लिएर आउन भनियो । उनलाई विवाहका बारेमा अरु कसैलाई नभन्न भनिएको थियो ।
उनले कुनै आफन्तलाई यसबारे जानकारी दिएन । डिसेम्बर ११ को साँझ उम्मेद सिंह केही साथीलाई जन्ती लिएर गए । तर गंगाले युवतीको माइतीमा कसैको नि’धन भएका कारण केही दिन पर्खन भने । त्यसपछि गंगा सिंहले उनलाई आफ्नै गाउँ मंगलोडमा जन्ती लिएर आउनु भनेर बोलाए । त्यहाँ फेरी गंगा सिंहले एक लाख पचास हजार रुपैया लिए र विवाह गराइदिए ।
विवाहको २ दिन पछि दुलही गंगा सिंह कान्तालाई ससुरालामा लिन आए । त्यसको दुई दिन पछि वेहुली माइत फर्किइन् । बेहुलीलाई उनले मोवाइल दिएर माइत पठाए । डिसेम्बर १ को दिन, उही मोबाइलबाट कान्तिले दुलहा उम्मेद सिंहलाई फोन गरीन् र भनिन् ‘म कान्ता हुँ। तिमीलाई धो’का भएको छ।
म विवाह भोजमा रोटी पकाउने काम गर्छु । मलाई त्यही भनेर तपाईको विवाहमा बोलाइएको थियो । तर ज’बरजस्ती विवाह गराइयो ।’ उम्मेद सिंहले अब जोधपुर जिल्लाको मातोदा पुलिस स्टेशनमा बिचौलिए गंगासिंहको वि’रुद्ध उजुरी दिएका छन् ।
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७७ साल पौष ११ गते शनिबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२० डिसेम्बर २६ तारिख
पाथीभरामा आगलागी नियन्त्रण बाहिर : मन्दिरनै जोखिममा, हेलिकोप्टर बाहेक आगो निभाउन असम्भव……
यो हप्ताको राशिफल हेर्नुहोस् : माघ ११ गते आईतबारदेखी माघ १७ गते शनिबार सम्मको
जब भयो दुई श्रीमानको जम्काभेट, भयो यस्तो ब’बाल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)